Réponses pour «haino»:
GUIDE A L'INTENTION DES JOURNALISTES - PROJET INCIPALS 100%
31 5B - Ny fitanilan’ny haino aman-jery p.
Candidature BMOI Amiedesarts-VF-VM 96%
ZAVA-­‐KENDRENA	BMOI	Amie	des	Arts	dia	mikendry	ny	hanosika	ny	mpanakanto	amin’ny	fanomezana	azy	ireo	fampirantiana	sy	fisehoana	mivelatra	ho	hitam-­‐bahoaka	ary	fitaterana	amin’ny	haino	aman-­‐ jery	misy	lanjany.
Fanambarana Ilontsera 25 Aogositra 2016 76%
-Manohitra ny fampisaraham-bazana an'ireo mpisehatry ny haino aman-jery sy ny fizarazaran'izy ireo;
SEKTA, NY PAIKADINY SY NY AMPINGAKO 61%
Tsy izay miorim-ponenana eto Madagasikara ihany, fa noho ny fandroson’ny hairaha mikasika ny fifandraisana sy ny fampitam-baovao ihany koa, dia tena maro amin’ireny fikambanana ireny no miasa mafy amin’ny alalan’ny fitaovana samihafa, toy ny haino amanjery sy ny tranonkalam-pifandraisana (internet) mba hanitarana ny ambain-dainy.
dany .24 56%
Ny radiố sy ny haino aman-jery samiháfa dia samy naného ny fahatezeran’ny vahoaka avokóa taorian’iñy fanambarán-dRatsiraka Didier Ignace tamin’ny 10 aogoşįtra 2003 iñy.
Tsy nisy fahoriana farany izáy nanorisóry azy tahaka ny firesahana amin’ny mpiandraikitry ny Haino Amanjéry, ka ao anatin’izány ny mpanáo gazéty.
I Zaranaina sy Andriamanjáto Richard moa, dia no anisan’ny olona izáy notazonin'ny ampahan'ny vahoaka Malagásy, ho no tomponandraikitry ny fampibaribariana, tamin’ny alálan’ny haino aman-jery, hono, kanéfa tsy fantatro izáy mety ho no fahamarinan’izány, ny tįrakįta momba ny veliranom-pifankatiavana izáy nifanoloran’i Marc Ravalomanana sy ny devóly;